सोच्ने नसकिने ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ? - ramechhapkhabar.com
सोच्ने नसकिने ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
सुनचाँदीको भाउ आज घटेको छ । सुन आज तोलामा सात सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ भने चाँदी १० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ९१ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
हिजो तोलामा ९२ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै, हिजो तोलाको १२ सय ३५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १० रुपैयाँले घटेर १२ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय भाउ अनुसार हरेक दिन सुनचाँदीको भाउ निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकको बोनस सेयर आइपुग्यो डिम्याट खातामा
कामना सेवा विकास बैंकले १८.५०% बोनस सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ । बैंकले गत कात्तिक ९ गतेसम्म सेयर डिम्याट गराएकाहरुको बोनस सेयर खातामा पठाइदिएको हो । कात्तिक ९ पछि डिम्याट गर्नेहरुको बोनस सेयर पनि खातामै जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म पनि डिम्याट नगरेकाहरुले खातामा बोनस सेयर पाउनका लागि पहिला आफूसँग भएको भौतिक प्रमाणपत्र डिम्याट गर्नुपर्नेछ । अनिमात्र बोनस जम्मा गरिने बैंकले बताएको छ । कामना सेवाको कात्तिक २३ गते सम्पन्न सभाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट १८.५०% बोनस सेयर र कर तिर्न ०.९७% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।